Madaxweynaha oo ku baaqay shir lagu saxayo jihaynta doorashooyinka | Dhacdo
Home Wararka Maanta Madaxweynaha oo ku baaqay shir lagu saxayo jihaynta doorashooyinka
Madaxweynaha oo ku baaqay shir lagu saxayo jihaynta doorashooyinka
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda, Maxamed Xuseen Rooble ku eedeeyay inuu ka gaabiyay hoggaaminta iyo hirgelinta doorashooyinkii uu u xilsaaray 1-dii bishii May ee sanadkan.
Madaxweynaha ayaa ku baaqay shir wadatashi ah, oo lagu saxayo jihaynta doorashooyinka, sida lagu sheegay war qoraala oo goor dambe oo xalay ahayd ka soo baxay xafiiskiisa.
Qoraalka ayaa u qornaa:-
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo;
Markuu arkay habraacyadii hirgelinta doorashooyinka iyo xeerarkii lagu dhisay guddiyada Heer Federaal, Heer Dowlad Goboleed iyo Guddiga Xalinta Khilaafaadka ee soo baxay 1-dii Oktoobar 2020;
Markii ay u caddaatay in 14 bilood keddib saxiixii Heshiiskii 17ka Sebteembar 2020 in aysan weli dhameystirmin doorashooyinka dalka;
Markuu arkay inuu Wasiirka Koowaad ka gaabiyay hoggaaminta iyo hirgelinta doorashooyinkii uu u xilsaaray Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sidii ku caddayd khudbaddii uu Madaxweynuhu ka horjeediyay Golaha Shacabka 1-dii May, 2021.
Markii ay caddaatay in Ra’iisul Wasaarahu uu ka leexday dhibbihii hirgelinta doorashada, isaga oo kala dhantaalay wadajirka guddiyadii loo igmaday fulinta iyo qabashada doorashooyinka, kuna xadgubay madaxbannaanidooda shaqo.
Markuu arkay in Ra’iisul Wasaaraha uu soo saarayo go’aanno keligiis u gaar ah oo ay ka dhalanayaan caqabdo khatar ku ah geeddi-socodka doorashooyinka;
1. In Ra’iisul Wasaaruha uu gudan waayay waajibaadkii loo igmaday ee ahaa hoggaaminta doorasho ku dhisan Heshiiskii 17kii Sebtember 2020 iyo habraacyadii dhammeystirayay ee soo baxay 1-dii Oktobar 2020;
2. Madaxweynuhu wuxuu ku baaqayaa in la isugu yimaado shir wadatashi ah oo lagu saxayo jihaynta doorashooyinka, kaas oo ay ka soo qaybgalayaan Goleyaasha Dowladda ee Heer Federaal, Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir, si la isugu waafaqo hoggaan awood u leh hirgelinta doorasho dhameystiran oo si hufan dalka uga dhacdo.
3. Madaxweynuhu wuxuu ku baaqayaa in la dhageysto talooyinka waxgaradka, siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka ah ee qaba tabashooyinka la xiriira doorashooyinka, si loo helo hannaan doorasho oo ku dhammaada jewi nabdoon oo loo siman yahay.
Nagala so xiriir dhacdo@gmail.com
Previous articleGolaha Midowga Musharaxiinta oo baaq u jeediyay Guddiyada Doorashooyinka
Next articleHormuud oo labaatan kun oo dollar ugu deeqday Iskuulka Mucaasir